Ungalwakha njani uluhlu lokuthenga olusempilweni Discover Discover Discover online ▷ ➡️
Uluhlu olusempilweni lokuthenga lunokuba sisixhobo esinamandla kwabo bafuna ukutya okunokulinganisela. Kuyanceda ukwenza izigqibo ezizizo kwaye kuvuselele inkqubo yokupheka.
Isenzo sokupheka sisidibanisi esihle somgangatho wobomi kwaye ivumela ukuphindwaphindwa kweencasa ezintsha ukuze kwandiswe ngokudibana nokutya okwahlukeneyo.
1 Ukucwangcisa uluhlu lokuthenga kubalulekile
2 Iingcebiso zokwakha uLuhlu lwakho lokuThengisa olusempilweni
Ukucwangcisa uluhlu lokuthenga kubalulekile
Ukuya kwintengiso kunye noluhlu lokuthenga olusempilweni olulungiselelwe ngaphambi kokuba uphume ekhaya kuyaqhubeka ukufaka isandla kucwangciso kunye nasekugxileni. Kuphela kwento efunekayo ngokwenene ibandakanyiweyo, ethintela inkcitho yako nakuphi na ukutya okungatyiwa kunye neendleko zemali ezingeyomfuneko.
Xa usiya kuthenga, ingcebiso kukulandela uluhlu kwaye uphephe ukuhamba ngeepaseji amaxesha amaninzi, ngakumbi iilekese. Ukuxhathisa iimfuno, musa ukuya kwivenkile ulambile.
Kwizinto ezingenakonakala kancinci, ezinje ngokutya okubandayo, ezinye izinto zokutya, kunye nococeko kunye neemveliso zokucoca, ukuthengwa kunokwenziwa ngenyanga. Ukhetho olucetyiswayo lweziqhamo kunye nemifuno kunye neemveliso zobisi kukuthenga veki nganye ngokosetyenziso lwasekhaya.
Iingcebiso zokwakha uLuhlu lwakho lokuThengisa olusempilweni
Hlela ifriji yakho kunye nepryry. Ngale ndlela ungabona into engekhoyo kwaye wenze uluhlu oluchanekileyo. Thatha ithuba lokujonga imihla yokuphelelwa kwezinto kwisitokhwe.
Zama ukucinga ngemenyu yeveki nganye. Ngale ndlela, uyazi izithako oza kuzifuna, ulawule ngcono ixesha lakho ekhitshini kwaye ugcine ukutya okunempilo kunye nokutya okunesondlo.
Ukubeka phambili ukutya okutsha kunye noluhlu lwezinto ezimbalwa ezinamashishini njengoko zinokwenzeka kuluhlu lwakho. Soloko ubandakanya imifuno, iziqhamo kunye nemifuno.
Yiba nendlela yokuthenga-nokuba ngeveki okanye ngenyanga. Ngale ndlela, ukutyelelwa kaninzi kwivenkile kuyathintelwa, okunokubangela ukuthengwa okungxamisekileyo, ukusetyenziswa okuthe kratya kweemveliso zeshishini kunye nenkcitho eyongezelelweyo.
Yahlula uluhlu ngokwamaqela: ukutya okomileyo, ukutya okutsha, iziselo, ubisi, inyama, ukutya okungumkhenkce, ukucoca kunye nococeko lomntu. Ngale ndlela, xa ukwivenkile enkulu, uyakuphepha ukuhamba lonke uluhlu lonke ixesha kunye nokonga ixesha ezisezitratweni.